मोदी भ्रमणबारे संसदको गुनासो, यस्तो छ परराष्ट्र मन्त्रीको जवाफ ! | mulkhabar.com
मोदी भ्रमणबारे संसदको गुनासो, यस्तो छ परराष्ट्र मन्त्रीको जवाफ !
May 14, 2018 | 6:21 pm 200 Hits
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणले परिवर्तित समयमा सम्बन्ध थप सुदृढ बनाएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले विशेष समयमा वैशाख २८ र २९ गते भएको मोदी भ्रमणका विभिन्न प्रसंगबारे प्रश्न उठाएका थिए।
कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गर्दा धेरै विषय समेटिएको तर अहिले केही विषय मात्र समेटिएको बताएका थिए। जवाफमा ज्ञवालीले ‘सेप्टेम्बर १९ को डेडलाइन बनाएर सबै विषयहरूमा छलफल भएको’ बताए। सांसदहरुले भारतीय सांसद किर्ती आजादको ट्वीटको प्रसंग समेत उठाएका थिए। जनकपुरलाई भारतम मिसाएर मिथिला राज्य बनाउन माग गर्दै आजादाले ट्वीट गरेका थिए। सांसदहरुले उक्त भनाइप्रति सरकारको धारणा माग गरेका थिए।
‘नेपालको सन्दर्भमा आएको धारणा सम्बन्ध बिगार्ने कुत्सित मनसायबाट लक्षित छ। भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु’, ज्ञवालीले भने। उनले अभिनन्दनमा प्रयोग भएको भाषा र तौरतरिकामा ध्यानाकर्षण गराएकोमा सांसदलाई धन्यवाद दिए। ‘नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध संघीय सरकारको अधिकार भित्र पर्छ। कुनै कुटनीतिक सम्झौता गर्दा संघीय सरकारको सहमति लिनु अपरिहार्य छ’, ज्ञवालीले भने, ‘अभिनन्दनका क्रममा संविधानको विषयमा व्यक्त विचार कुटनैतिक मर्यादाअनुसार राजनीतिक संस्कारसम्मत भएन। अभ्यासको कमीले होला। भोलिका दिन यसलाई प्रभावकारी ढंगले लैजानेछौं।’
कांग्रेस सांसद गगन थापाले जनकपुरमा प्रयोग भएको झण्डाबारे प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई नभई परराष्ट्र मन्त्रीलाई पाठ पढाउनु पर्ने बताएका थिए। ज्ञवालीले जवाफमा भने, ‘म सधैँ विद्यार्थी हो। सिक्न तयार छु।’ उनले प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्रीको एक्लाएक्लै वार्ता कूटनीतिक प्रचलन भएको बताए। ‘जनताको साथ रहँदासम्म अपारदर्शी ढंगले काम गर्नु पर्ने छैन’, ज्ञवालीले भने।
उनले पत्रकारहरूलाई मोदीको भ्रमणको समाचार संकलनमा पास वितरणमा समस्या भएर सूचनासम्म पहुँच नपाएकोमा विषयमा समीक्षा गर्ने बताए। ‘नेपालका सञ्चारकर्मीलाई पहुँच नदिनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन’, ज्ञवालीले भने, ‘भेटघाट मर्यादित व्यवस्थित हुन् भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’ ज्ञवालीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको सुरक्षा नेपाली सुरक्षाकर्मीले नै प्रबन्ध गरेको जिकिर गरे।
‘नेपालको सुरक्षाकर्मी पर्याप्त मात्रामा सक्षम छन्। भ्रमणको सुरक्षा प्रबन्ध नेपाली सुरक्षाकर्मीले गरेका हुन्’, ज्ञवालीले भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग निजी सुरक्षाकर्मी आएका हुन्। हाम्रा प्रधानमन्त्री जाँदा पनि जाने गर्छन्। नेपाल सरकारका सुरक्षाकर्मीमाथि पूर्ण भरोसा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।’ उनले भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मिति द्विपक्षीय सहमतिमा तय भएको बताए। माओवादी केन्द्रकी सांसद पम्पा भुषालले मिती सार्वजनिक भारतीय तर्फबाट हुँदा कूटनीतिक कमजोरी देखिएको बताएकी थिइन्।
‘भ्रमणको मिति दुबै पक्षको सहमतिमा तय भएको हो। कुनै पक्षले मिति प्रस्ताव गर्दा त्यही सदर गर्नुपर्छ भन्ने होइन’, ज्ञवालीले भने। उनले पश्चेश्वर आयोजनाको छलफल गर्न गठित प्राविधिक कार्यदल समय सेप्टेम्बर ३० सम्म बढाइएको जानकारी दिए।
‘आयोजनाको विषयभन्दा बढी पानीको बाँडफाँडको विषय जोडिएको छ। यी समस्या समाधान हुँदै जानेछन्’, ज्ञवालीले भने।
उनले भारतीय दूतावासको विराटनगरमा रहेको फिल्ड अफिस, सीमा समस्या र बढ्दो व्यापार घाटाका विषयमा सकारले कुरा उठाइराखेको बताए। मन्त्री ज्ञवालीले नाकाबन्दीको विषयमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा भने सवालजवाफ नै गरे। कांग्रेस सांसद गगन थापा र मिनेन्द्र रिजालले नाकाबन्दी गलत थियो भन्न नदिइएकोप्रति आपत्ति जनाएका थिए। ‘हामीले विगतमा लगातार नाकाबन्दीको कुरा उठायौं। त्यतिबेला बोल बोल माछा मुखभरी पानी भनेजस्तो नाकाबन्दी भन्न पनि नरुचाउने देखियो’, ज्ञवालीले भने, ‘अहिले अन्धराष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद भनिदैँछ।’